Ukuyeka uonobumba ngokusebenzisa i-3-step step recovery model Umvuzo weZiseko
Ikhaya Ukuyeka Ukuzixhamla Imodeli yamanqanaba amathathu okubuyisela kwakhona kumvuzo
Iqela kwiThe Reward Foundation liphuhlise imodeli yamanyathelo amathathu yokubuyisela umba wokusetyenziswa kwengxaki ye-intanethi. Yindlela elula yokuyeka ukusebenzisa i-porn kunye nokuhlula ukulutha. Ukubuyela kwimeko yesiqhelo kukwenza ukuba ingqondo iphilise ekuguqukeni okwakha ngaphezulu kweenyanga okanye iminyaka. Yindlela elula esekwe kuphando kwindlela yokufunda kunye neziyobisi esebenza ngengqondo. Unokuzama ezi ngcebiso apha ngoncedo loluntu lokuphinda ufumane i-intanethi ekuhlaleni njenge nofap.com or rebootnation.org. Unokugqiba isigqibo sokuba ukhetha uluntu lwentlalo lokuphucula ubomi njengenkqubo yesinyathelo se-12. Ngaphandle koko, umgqirha oqeqeshiwe ekujonganeni nokuziphatha okubi ngokwesondo unokuhlangabezana neemfuno zakho.
Uninzi lweengcali ziqala ngoku ukufunda malunga nokungasebenzi kakuhle kwe-erectile kunye nezinye iingxaki ezinxulumene ne-porn ezinje ngoxinzelelo okanye uxinzelelo. Ke qiniseka ukuba bayayikhangela le webhusayithi okanye yourbrainonporn.com. Uninzi lwabanyangi baqeqeshiwe kwisayikholoji ngaphandle kokufunda malunga nokusebenza kwengqondo. Ukuvuza ingqondo yakho ukuze ufunde umkhwa kwaye uphinde ufunde amaqhinga amatsha akulula. Nangona kunjalo, iyenzeka kwaye iyakubuphucula ubomi bakho obungenasiphelo. Uninzi lwabafana bathetha "ngokuqalisa" iingqondo zabo. Njengokuba sinokwenza ngekhompyuter edibeneyo xa uninzi lweefestile luvulekile. Oku kuqalisa kwakhona okanye Iakhawunti yokubuyisela ngamakhulu abantu abatsha abonisa indlela enokuyenza ngayo.
Imigaqo yoMzekelo wokuBuyisa
Le yimigaqo emithathu elula:
Yeka ukusebenzisa ityala.
Funda izakhono zobomi eziphambili.
Isinyathelo 1 - Yeka ukusebenzisa ityala
Ukubuyiselwa kunokuqala kuphela xa umntu ekhetha ukuyeka ukukhangela aze ayeke ukucinga ngento engamanyala.
Ukuba nefuthe lokuzama ukuyeka ukuchitha i-intanethi ye-intanethi, umsebenzisi kufuneka aqonde ukuba unako ukudala iingxaki zempilo yengqondo kunye nempilo kunye noluntu. Kungakhokelela ekufumaneni irekhodi lobugebengu. Yabona Indlela yokujonga ingxaki yezononophelo.
KwiSiseko soMvuzo sisebenzisa ibinzana elithi "thabatha iglasi ngaphandle kwilonda". Wonke umntu uyaqonda ukuba inxeba ayikwazi ukuqala ukuyiphilisa ngelixa iqela leglasi lingasenyameni, elibangela ukulimala. Ngoko ukususa ingcinezelo yokusebenzisana rhoqo kunye ne-intanethi ye-intanethi kwenza ukuba ubuchopho buqalise. Iyakwazi ukuphilisa kunye nokuhlaziya kumanqanaba aqhelekileyo okuvusa.
Qalisa ngesigqibo sokukunika. Zibekele ithagethi lemihla ye-1. Injongo kukuqala ukuqaphela iimpawu zethu zomzimba nokufunda kangcono indlela yokuphendula ngayo. Phawula ukuba ziphi ixesha lemihla enokuthi ubukele iifoto. Yintoni 'bongozaukuyijonga ngathi? Olu luvo lokutsala kwemfazwe kwingqondo. Ngumnqweno wokufumana ukonwaba kwee-neurochemicals ukunqanda ukungonwabi ngenxa yokungabikho kwabo. Kukhuphisana nomnqweno wokungqina ukuba sinako ukuzilawula. Isikhuthazo sisilumkiso se-dopamine esezantsi okanye ii-opioid ezisezantsi kwingqondo. Ikwabonisa ukuqala kwempendulo yoxinzelelo kunye ne-adrenaline-induction arousal isinyanzela ukuba "senze into NGOKU!"
Ukukwazi ukunqumama okwexeshana lokubeka iziqhoboshi zengqondo kwaye ucinge ngaphambi kokuba usebenze kunceda ukuyenza buthathaka indlela kwaye iqale ukwahlukana nomkhwa. Kungumsebenzi obalulekileyo ukuzama ukophula nawuphi na umkhwa esingasafuniyo. Inceda ekwakheni ukuzeyisa. Esi sesinye sezona zakhono zibalulekileyo ebomini kwimpumelelo yexesha elide. Yonke into ibaluleke njengobukrelekrele okanye italente. Funda ngendlela abanye abaye bamelana ngayo xa bazama. Sonke kufuneka sikhethe phakathi kweentlungu ezimbini, iintlungu zokuzibamba okanye iintlungu zokuzisola.
I-Day-Day Screen Fast
Oku kungasetyenziselwa ukuvavanya indlela othembekileyo ngayo nawuphi na umntu ekudlala, kumajelo asekuhlaleni kunye noonobumba.
Nantsi ingqungquthela evela kwincwadi Ukuzihlekisa Ekufeni: Intetho Yomphakathi Ngexesha Lokubonisa Ibhiziniselwano, nguN. Postman no-A. Postman. (Isingeniso).
“Omnye unjingalwazi usebenzisa le ncwadi ngokudibene nolingo alubiza ngokuba yi-'e-media fast '. Isithuba seeyure ezingamashumi amabini anesine, umfundi ngamnye kufuneka ayeke ukusebenzisa izinto ze-elektroniki. Xa ebhengeza isabelo, wandixelela, iipesenti ezingama-90 zomfundi, becinga ukuba ayisiyonto inkulu leyo. Kodwa xa beqonda zonke izinto ekufuneka bazincamile usuku lonke-iselfowuni, ikhompyuter, i-Intanethi, umabonwakude, unomathotholo wemoto, njl.njl. "Baqala ukugcuma nokugcuma." [kodwa] basenako ukufunda iincwadi. Uyavuma ukuba luyakuba lusuku olunzima, nangona malunga neeyure ezisibhozo kwezingamashumi amabini anesine bebe belele. Uthi ukuba bayakhawuleza ukuzila-ukuba baphendula umnxeba, bathi, okanye kufuneka bajonge i-imeyile- kufuneka baqale kwangoko. "Amaphepha endibuyayo ayamangalisa," utshilo unjingalwazi.
“Banezihloko ezifana 'Olona Suku Lubi Kobomi Bam' okanye 'Olona Lwazi Lubalaseleyo Ndakha Ndanalo,' zihlala zigqithile. 'Bendicinga ukuba ndiza kufa,' bazobhala. 'Ndiye ndayokuvula i-TV kodwa ukuba ndiyenzile, ndiyaqonda, Thixo wam, kuya kufuneka ndiqale kwakhona.' Umfundi ngamnye unobuthathaka bakhe-kwabanye yiTV, abanye iselfowuni, abanye kwi-Intanethi okanye kwi-PDA yabo. Kodwa akukhathaleki nokuba bakuthiyile kangakanani ukungavumi, okanye ukuba kunzima kangakanani ukuva ukukhala kwefowuni kwaye ungayiphenduli, bathatha ixesha lokwenza izinto abangazenzanga kwiminyaka edlulileyo.
Ngokwenene bahamba ngesitrato ukuya kutyelela umhlobo wabo. Bazandisile incoko. Omnye ubhale wathi, 'bendicinga ukwenza izinto ebendingazange ndicinge ukuzenza.' Amava ayabatshintsha. Abanye bachaphazelekile kangangokuba bazimisela ukuzila ukutya, usuku olunye ngenyanga. Ngelo xesha ndiye ndibabhalele izinto zakudala — ukususela kuPlato noAristotle ukuza kuthi ga namhlanje — nakwiminyaka kamva, xa ababesakuba ngabafundi babhala okanye befowunela ukubulisa, eyona nto bayikhumbulayo kukusasazwa ngamajelo eendaba. ”
Unyana wombhali wale ncwadi ngoku kwiphepha lamashumi mabini uthi:
“Imibuzo yakhe inokubuzwa ngazo zonke iitekhnoloji kunye namajelo eendaba. Kwenzeka ntoni kuthi xa sithandeka size sikhohliswe ngabo? Ngaba bayasikhulula okanye basivalele entolongweni? Ngaba bayayiphucula okanye bayayijongela phantsi inkululeko? Ngaba zenza iinkokheli zethu ziphendule ngakumbi okanye zingaphantsi koko? Ngaba iinkqubo zethu zicace gca okanye zincinci? Ngaba basenza abemi abangcono okanye abathengi abangcono? Ngaba ukurhweba-kurhweba kufanelekile? Ukuba abafanelekanga, okwangoku asikwazi ukuzinqanda ekwamkeleni into entsha elandelayo kuba yindlela esixhonywe ngayo, ke zeziphi iindlela esinokuthi sizicwangcise ukugcina ulawulo? Isidima? Intsingiselo? ” Bona eyethu ibali leendaba indlela iqela lesithandathu lesibini esikolweni esikolweni sase-Edinburgh lalawulwa ngayo xa senza i-24 yeyure ngokukhawuleza.
Ukusetyenziswa ngokugqithiseleyo koononophala?
Zama oku ukuvavanya ukuba umntu usebenzisa i-intanethi yecala.
Ukuba umntu umazi okanye wena ngokwakho, ufuna ukuzama olu vavanyo losuku olunye lokupheliswa kwe-intanethi kuphela, kufanelekile. Ukuba uyaphumelela, unokufuna ukongeza ukupheliswa ixesha elide. Kungalula ngokufanelekileyo ukunqumla isimilo sokuziphatha iiyure ezingama-24, kodwa iveki okanye iiveki ezintathu lolona vavanyo lokwenyani lokuba umkhwa unyanzelekile kangakanani.
Ukuqalisa kwakhona kunokuqalisa ngokukhawuleza. Iyure yokuqala, usuku lokuqala kunye neveki yokuqala xa abantu abaninzi baqala ukuphindaphinda bangakwazi ukunqoba umdlalo wokubheka ngaphezulu. Ukuba uqeqeshe ubuchopho bakho kwi-porno ixesha elide, kuya kuthatha ixesha elide ngaphambi kokuba uhlalise i-porn-free. Ukuqalisa kwakhona akuyona inkqubo elula. Ukuba uyifumana kulula, vele ubulele. Uninzi lwabantu lulunzima. Nangona kunjalo, waqaphela kwangaphambili. Ukwazi malunga neempawu ezingokomzwelo okanye emzimbeni abanye ababuyiselwayo abaye bahlangabezana nazo endleleni yabo yokufumana kwakhona uncedo olukhulu.
Ukushiya ngokungafani nokusika
Ukunciphisa nje (ukunciphisa ingozi) akusebenzi kwiindlela ezininzi zokuziphatha. Ukufumana indlela yokuyeka ukusebenzisa iphonografi akunjalo. Ngokukhawuleza xa sinoxinzelelo, kwaye wenze loo nto 'wenze into NGOKU!' Imvakalelo, ukufumana ukubetha ngokulula kweekhemikhali zokuziva ulungile kwi-smartphone okanye ithebhulethi yethu kunokuba lula kakhulu. Ukunciphisa nje ukusetyenziswa gwenxa kwe-porn akwanelanga kubantu abaninzi, kuyandisa nje umkhwa. Iindlela eziphuhliswe kakuhle zilawulwa ngokulula. Kungathatha iinyanga, nokuba yiminyaka kwezinye zeenkani, ukukhula iindlela ezintsha ezisempilweni kwaye ungabuyiswa umva. Kungathabatha imizamo eliqela yokulinga kunye neempazamo ukugcina umkhwa wokuziphazamisa ekubukeleni iphonografi, ixesha elide. Cinga ke ngoku:
Yeka ukubukela i-intanethi ye-intanethi
Funda ukusebenzisa intanethi ngaphandle koononophala
Isinyathelo se-12, iiprogram ze-SMART kunye neenkqubo zoncedo zontsebenziswano ziya kunceda bonke
Funda indlela inkqubo yokuvuza yengqondo i sebenza. Ukuqonda ukuba olu xhotyiso yimeko yesifo sengqondo eyanciphayo kunceda ukuba lula ukulula
Qaphela izinto ezibangelwayo kunye neengongoma ezibekwe ukutshaya kwakho. Fumana iindlela zokuziphepha
Inyathelo 2-Thambisa ingqondo
Uninzi lwabahlali bazuza kwiindlela ezithile zenkxaso yengqondo. Oku kunokuvela kubahlobo kunye nosapho okanye kwiingcali ezisebenza njengabagqirha. Yilapho uthando ngohlobo lwe-hugs, i-cuddles, ubuhlobo, ukuthembela kunye nokudibanisa konke kunokunyusa amanqanaba e-oxytocin ye-neurochemical engqondweni. I-Oxytocin ineempawu ezininzi ezincedo zokunceda ukulinganisela ukuhamba kombane kunye namachiza e-neurochemicals:
Ukuphikisa i-cortisol (uxinzelelo kunye nokudakumba) kunye ne-dopamine (izifiso)
Iyanciphisa iimpawu zokuhoxisa
Uqinisa ubudlelwane kunye neemvakalelo zokhuseleko
Ikhuthaza ukuvakalelwa, ukwesaba nokukhathazeka
Enye yeendlela ezilungileyo zokwakha ukomelela koxinzelelo kunye nobunzima bemihla ngemihla kukuhlala upholile ngokwengqondo. Enye inguqu eyaziwayo namhlanje ibizwa ngokuba yiNgqondo. Kuthetha ukunaka ingqalelo kuyo nayiphi na indlela esivakalelwa ngayo okanye esicinga ngayo ixesha elincinci ngendlela engagwebiyo. Endaweni yokucinezela okanye ukuzama ukungahoyi iingcinga zethu zoxinzelelo okanye ukungabinalo ixesha lokujongana nazo, siyazivumela ukuba zize ezingqondweni zethu kwaye sizibukele ngaphandle kokuzama ukuzibetha ngoyaba okanye ukuzisombulula okanye sizigwebe ngandlela yimbi.
Ukuhlanganiswa ngempumelelo kwezixhobo zokuxhasa kunokunceda. Uninzi luphakamisa amanqanaba ethu e-oxytocin.
Ingqiqo isebenza kakuhle ngokudibanisa neCognitive Behaeveal Therapy (CBT). Apho i-CBT isebenza kwinqanaba lokuqonda, elinengqiqo lokutshintsha imikhwa emibi yokucinga kunye nokuqonda, ukucamngca ngengqondo kusebenza kwinqanaba lokungazi, elingenamlomo.
Ukuvakalisa iNzululwazi (MI) kuye kwabonisa ukuba luncedo ekuncediseni abasebenzisi abasebenzisa iidakamizwa abaselula ukuba bangazikhuseli ngokukhuthaza ukuqonda okuncedo.
Inkqubo yokunciphisa uxinzelelo
Iimpawu ze-MRI zibonise ukunciphisa umbandela (amangqamuzana omzimba) kwi-amygdala (uxhala)
Ukunyuka kwemigca kwi-hippocampus - imemori nokufunda
Ivelise iingeniso zengqondo eziqhubekayo kulo lonke usuku
Ingxelo yokunciphisa uxinzelelo
Sebenzisa yethu yokuzilahla ngokukhululekile ukukunceda ukhulule kwaye ubuyele ubuchopho bakho. Ngokunciphisa ukuveliswa kweengxaki ze-neurochemicals, uvumela umzimba wakho ukuba uphilise. Ingqondo yakho ingasebenzisa amandla okuqonda kunye neengcamango ezintsha.
Ingcamango kwesi sesithathu kukukhupha ingqondo ngaphandle kokubonisa nayiphi na imiqondiso yentshukumo yomzimba ukuze ukwazi ukuyenza kwisitimela okanye xa abanye bekhona. Igcina imizuzu ye-18.13.
Nini ukwenza ukuphumla okunzulu?
Inyathelo 3 -Funda izakhono zobomi eziphambili
Abanye abantu banobume bemfuza okanye ubuthathaka obuzelweyo obuthetha ukuba bafuna ngaphezulu 'kokukufumana' i-neurochemical, i-dopamine, ukufezekisa inqanaba elifanayo lokuqhuba kunye nolonwabo njengomntu ongenalo uguquko kwimeko yemfuza. Abo bantu, ipesenti encinci, bathambekele ekubeni likhoboka kunabanye. Ngokubanzi, nangona kunjalo, abantu bawela ekunyanzelekeni kokuziphatha okanye ukuba likhoboka lezizathu ezibini eziphambili.
Kuqala baqala ukufuna ulonwabo kunye nokonwaba njengaye wonke umntu kodwa ukuphatha ngamanye amaxesha kunokuba ngumkhwa oqhelekileyo. Sonke sihendeka ngokulula kwisithembiso 'sokonwaba' nokuba iziphumo siphulukene nomsebenzi, iintlungu, iintambo, ukudibana nabantu, izithembiso ezaphukileyo. Ixesha elingaphezulu uxinzelelo lwentlalontle kunye nentengiso zinokusikhokelela ekuzonwabiseni okubangela utshintsho kwingqondo yomzimba kwinkqubo yethu yomvuzo eyenza ukuba kube nzima ngakumbi ukuxhathisa. I-FOMO okanye 'uloyiko lokuphoswa' ngumdlalo weengqondo wentlalo ekufuneka siwazi. Imithombo yeendaba kwezentlalo iyanceda ekuphuhliseni loo ntshulube yobuchopho.
Indlela yesibini yokuphucula umlutha ivela kumnqweno ongathandabuzekiyo wokuphepha imeko ebuhlungu okanye umgudu kubomi bemihla ngemihla. Inokuvela kuba umntu akazange afunde izakhono zobomi zokumelana neziganeko ezinje ngeemeko ezintsha, ukudibana nabantu, ungquzulwano okanye ubundlobongela bosapho. Ukufuna ukonwaba ekuqaleni kunokudambisa uxinzelelo okanye kuthomalalise iintlungu, kodwa ekugqibeleni kunokuba luxinzelelo olukhulu kunengxaki yokuqala. Iziyobisi zibangela ukuba umntu ajolise ngokupheleleyo kwiimfuno zakhe kwaye akafumaneki ngokweemvakalelo kwabanye. Uxinzelelo luyakha kwaye ubomi buba phezu kwabo, ngaphandle kolawulo. Abathengisi bezinto ezikhuthazayo ezinje nge-porn, utywala, ukungcakaza, ukutya okungenamsoco, kunye nokudlala ukukhankanya ezimbalwa, amaxhoba kumnqweno wethu wokufuna ukonwaba kunye nokungahoyi iimvakalelo ezibuhlungu okanye iimeko ezibandakanya umzamo.
Izakhono zobomi eziphambili zokufunda zinokukunceda ukutshintsha oku nokunciphisa umngcipheko wokuwa phantsi kokudakumba nokulutha. Ukususa nje ukuziphatha kakubi kudla ngokwaneleyo. Impendulo ebangela uxinzelelo iya kuhlala ikhona ishiya umntu ethe-ethe kwaye engakwazi ukujongana nokugxekwa okanye ukungqubana. Kukho amabali amaninzi abantu abakwaziyo ukuyeka utywala okanye iziyobisi kwaye bafumane umsebenzi kuphela xa bephantsi komqondiso wokuqala wokungavumelani, emva koko baphinde babuye. Kukho amabali amnandi nawo amadoda nabafazi abancinci abafumana amandla amatsha kunye nesibindi sokujamelana neemeko ezinzima xa beyeka iphonografi. Abanye bathetha ngokuphuhlisa "amandla amakhulu".
Abantu abachaphazelekayo bayaphumelela ngokukuko kwaye bayakuphepha ukubuyela umva xa bekhulisa izakhono zobomi ukuze bandise kwaye bakhe ubomi babo kwaye babenze bube nomdla ngakumbi kwaye banelise. Kuthetha ukufumana idrive yabo kunye nolonwabo kwimithombo esempilweni ngakumbi ekunxibelelaneni nabanye buqu kunye nokuyeka iintloni, ukuziva unetyala kunye nokuziva ungathandwa, ukubekwa wedwa okanye uwedwa.
Kukho ubuninzi bezakhono zobomi ezahlukeneyo ezaziwa ukuba zincede:
Izakhono zobomi zokwakha impilo
Ukufunda ukupheka nokuzonwabisa ngokutya rhoqo
Ukufumana ubuthongo obunokubuyisela, iiyure ze-8 ngobusuku abadala, iiyure ze-9 kubantwana nakwishumi elivisayo
Ukuzilolonga umzimba, ngakumbi ukuchitha ixesha kwindalo
Ukuzihlaziya kwengqondo - umzekelo, ingqondo okanye ukuvumela ingqondo yakho ukuba ihambe
Izakhono zobomi ukwakha ukuzithemba
Ingqondo engafundiswanga ayinakufezekisa nto. Ukufunda ikhono elitsha ngenyathelo ngenyathelo kunokwakha ukuzithemba. Kuthatha ixesha. Ingqondo eyoluliweyo ayisayi kubuyela kwinto eyayiyiyo ngaphambili. Akukho mntu unokuthatha ubuchule bokufunda kuthi. Ubuninzi bezakhono esinazo, kokukhona sinokuphila kwiimeko eziguqukayo. Ezi zakhono zinciphisa uxinzelelo lokuphila ngokungaxakeki
Funda ukulawula iingcamango zakho, ukungabikho komsebenzi kunye neengcamango zesondo
Izakhono zombutho ekhayeni - ukucoca kunye neendlela zokuthenga; ukugcina amaphepha abalulekileyo, amatyala kunye neerisithi ngokulandelelana kwazo
Funda indlela yokufaka isicelo somsebenzi kwaye ulungiselele kakuhle i-interviews
Amandla emali - ukufunda uhlahlo-lwabiwo mali kwaye ukuba kunokwenzeka, gcina
Izakhono zobomi ukudibanisa nabanye ngolwazi olungcono
Ukufunda ukunyaniseka xa kufanelekile ngokuchasene nobudlova, ukunyusa okanye ukunyusa
Izakhono zokuphulaphula nokuphulaphula
Izakhono zolawulo lweengxabano
Ukuququzelela impilo, umz
Izakhono zobomi ukukhula, nokwandisa nokwakha njengabantu abaphelele
Ukuqulunqa ukuveza iimvakalelo zangaphakathi-ukufunda ukucula, ukudansa, ukudlala isixhobo, ukudweba, ukupenda, ukubhala amabali
Ukuzonwabisa, ukudlala imidlalo, ukuhleka, ukuxelela amahlaya
Umsebenzi wokuzithandela, ukunceda abanye
Leli phepha lewebhu linikezela nje umgca olula weReward Foundation i-3-step-recovery model. Siza kuvelisa izinto ezininzi ukuxhasa nganye yezinto kwiinyanga ezizayo. Unokwenza iiklasi kulezo zakhono zobomi esikolweni, kwiiklabhu zolutsha okanye kwindawo yakho. Zihlole kwilabhulali yakho yendawo okanye kwi-intanethi.
Nazi iindlela zethu ezintathu ezilula:
1 - Yeka ukusebenzisa i-porn
2 - Thambisa ingqondo
3 - Funda izakhono zobomi eziphambili
<< Ukuya Simahla kwi-Porn Inkqubo yeTrF 3-Inyathelo lokuThintela >>